U.S. Grower Profiles | PotatoesUSA-Myanmar
မင်နီဆိုးတားပြည်နယ်၊ ကားလ်စတဒ်မှာနေတဲ့ ဂျပ်စတင်ဒေဂန်ဟာ ပ ဉ္စမမျိုးဆက် စိုက်ပျိုးရေးသမားဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂၉ နှစ်တိုင်အောင် သူ့မိသားစုက ကနေဒါနယ်စပ်ရဲ့တောင်ဘက် ၅၅ မိုင်ပဲကွာတဲ့ စပရင်းဘရွတ်ခ်မြို့နယ်မှာ ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ “ဝိသေသလက္ခဏာ တည်ဆောက်ခြင်း ခရီးစဉ်” မှာ သူ လျှောက်လှမ်းနေတာ ၃၅ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ဇနီး ဒွန်နာနဲ့ သားသမီးလေးယောက်တို့ရဲ့ ကူညီထောက်ခံမှုတွေကြောင့် အခုထိ သူပျော်ရွှင်နေတုန်းပါ။.
အသိအမှတ်ပြု အစေ့အာလူးစိုက်ခြင်းဟာ ၇၅ နှစ်တိုင်အောင် သူ့စိုက်ခင်းရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ သူအသက် ၁၇ အရွယ်မှာ ဖခင်ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက် အဖေ့ခြေရာလိုက်နင်းဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ပြီး ၁၉၇၇ မှာ လုပ်ငန်းရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုကို တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ “ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပေါ့” လို့ သူပြောပြပါတယ်။.
Coloma Farms isastudy of innovation and tradition —a2,700-acre sustainable farm run by third and fourth generation growers, Steve and Andy Diercks. Steve grew up onapotato farm near Antigo, Wisconsin. He moved with his father, Robert, to the Central Sands Plains region in Coloma, Wisconsin, where they developedagreat working relationship with the University of Wisconsin (UW) potato researchers — part of the first stages leading to the development of Healthy Grown. Steve and Andy were involved from the beginning and much of the research done on their farm was integral to the establishment of the Healthy Grown standards.
"The challenge of sustainable farming is producing good quality and high yielding crops while minimizing the impact on the environment. Our experiences working with the potato teamat the UW taught us we could do things differently and not only produce exceptional potatoes, but do it inabetter way," notes Andy.
၂၀၀၅ မှာ ရှဲရယ်လ် ကွန်းမ်ပင်က Potatoes USA ရဲ့ International Food Aid Initiative အစီအစဉ်နဲ့ ယူအက်စ် ရေမဲ့အာလူးများကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတာ ဆီနီဂေါလူမျိုးတွေကို သင်ကြားပေးဖို့ အနောက်အာဖရိကကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ သူမဟာ Potatoes USA မှာ တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားနေပြီး ဒီဒေသမှာ အာလူးလုပ်ငန်းရဲ့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာအောင်လုပ်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။.
ကိတ်သ်နဲ့ သူ့ဇနီး ဂျိုဆလင်းမှာ သမီးတစ်ယောက် သားတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ “ငယ်ငယ်လေးတည်းက ကျွန်တော့်မှာ မြေကြီးနဲ့ အားကောင်းတဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိပါတယ်” လို့ လာဘရီက ရှင်းပြပါတယ်။ “မိသားစုရိုးရာဖြစ်တဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကို ဆက်လုပ်ခွင့်ရတာ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစုအတွက် ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။”/p>
ရေကြက်တွေအများကြီးရှိတဲ့ ကန်ဘေးနားကို ဆစ်ဒ်ရဲ့အဘိုးက ၁၉၂၉ မှာ စတင်အခြေချခဲ့တာကပဲ စတောင်တန်မျိုးရိုးအမွေကို စတင်စေခဲ့တာပါ။ အဲဒီနှစ်ရဲ့ အောက်တိုဘာမှာ သူ့အဘိုးရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေဟာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူကနေ စိုက်ပျိုးသူအဖြစ်သို့ ၂၄ နာရီအတွင်း လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။!